ODAYAAL DHAQAMEED SOMALI AH OO GARAYA 12 OO AY ETHIOPIA AY XIRTAY | Toggaherer's Weblog
Odayaal dhaqameed iyo waxgarad Soomaali ah oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo Kililka shanaad ee ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya, ayaa waxey wadaan dadaalo ay doonayaan, in ay Ciidamada Itoobiya ay uga sii daayaan odayaal dhaqameed Soomaali ah.
Odayaal dhaqameedkan Soomaalida ah ee ay xireen ciidamada Itoobiya ayaa garaaya ilaa 12 odey ayaa waxey ku xiran yihiin deegaanka Qalaafe, ee dhulka ay Soomaalidu degto ee ka tirsan Itoobiya.
Waxeyna ka kala tageen odayaashani deegaanada, Shilaabo, Mustaxiil, iyo Qalaafe waxeyna wadaan dadaalo ay ku doonayaan in ay ku sii dayaan odaayashan ay haystaan ciidamada Itoobiyaanku oo ay dhawaan ku xireen deegaanka Qalaafe oo ay ku eedeynayaan, in caruur ay dhaleen ay ka dagaalanto gudaha wadanka Soomaaliya, iyo dhulka Soomaalidu ay degto ee ay Itoobiya Maamusho.
Inkastoo la sheegin odayaashaan ay la kulmeen saraakiisha ciidamada Itoobiya hadana waxey wadaan Kulamo gooni gooni ah oo ay la qaadanayaan, maalimihii ugu danbeeyey deegaanka Shilaabo oo ay dadaal ugu jiraan sidii ay u sii deyn lahaayeen odayaashan.
Ciidamada Itoobiya ayaa sheegey xarigan ay xireen 12ka odey in ay caruurtooda ka dagaalanto itoobiya iyo Soomaaliya iyadoo ay wal wal xoogan ka qabaan shacabka Soomaalida ah ee ku dhaqan deegaanda ay Itoobiya maamusho.
Si kastaba ha ahaatee waxaanan la ogeyn In dadaalada ay wadaan ay ku guuleysan karaan iyadoo isku dayayaan in la kulmaan saraakiisha ciidamada Itoobiyaanka ah